Bicentennial Celebration - Embassy of Nepal - London, UK
गाेर्खा सैनिकका कारण नेपाल-वेलायत सम्बन्ध प्रगाढ’
बुधबार, ०२ चैत २०७३, Nagariknews
भूकम्पपछि नेपाललाई बेलायतको सहयोग १४ करोड पाउण्ड
– कान्तिपुर संवाददाता , लन्डन http://bit.ly/2n9F65l
चैत्र २, २०७३- नेपाल तथा बेलायतबीच कुटनीतिक सम्वन्ध कायम भएको २०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा नेपाली दूतावास लन्डनले मनाउन लागेको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मंगलबारसांझ एक समारोहबीच भव्य उद्घाटन गरिएको छ ।
प्रमुख अतिथि ड्यूक अफ ग्लस्टर दूतावास प्रांगणमा आइपुग्दा पन्चेबाजा बजाएर उनको भव्य स्वागत गरिएको थियो । बेलायतकालागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र दूतावास परिवारले माला लगाइदिएर उनलाई कार्यक्रमस्थल लगेका थिए।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ड्यूक अफ ग्लस्टरले इटन कलेजमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र आफ्नो सहपाठी भएको स्मरण गर्दै राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणमा आफू नेपाल गएर पदयात्रा गरेको स्मरण गरे । उनले नेपाल अत्यन्त सुन्दर मुलुक भएको र नेपालीहरु अत्यन्त सहृदयी भएको पनि बताए। उनले मित्रतालाई सृदृढ पार्न बेलायतले नेपाललाई सहयोग दिंदै आएको पनि बताए।
ब्रिटिश विदेश मन्त्रालयका स्थायी उपसचिव साइमन म्याकडोनेलले भूकम्पपछि नेपालमा राहत तथा पुनर्निर्माणमा बेलायतले १४ करोड पाउण्ड सहयोग प्रदान गरेको जनाए। उनले दुबै देशबीचको सम्बन्ध आउंदो २०० वर्षसम्म पनि फस्टाउने विश्वास व्यक्त गरे ।http://bit.ly/2n9F65l
कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत सुवेदीले नेपालीहरुको मनमा बेलायतको विशेष स्थान रहेको बताए। गोर्खा सैनिक भर्ती दुबै मुलुकबीच सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो कडी हो भन्दै उनले दुईवटा विश्वयुद्धमा झण्डै ४३ हजार गोर्खालीले ज्यान गुमाएको स्मरण गरे । उनले नेपालमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्रमा बेलायतले गरेको सहयोग निकै महत्वपूर्ण रहेको समेत बताए।
सोही अवसरमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सभासद डा. आरजु देउवाले नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको पहिलो मुलुक नेपाल भएको स्मरण गरिन्। उनले गोर्खाली सैनिकहरुको बलिदानले दुबै मुलुकहरुको सम्वन्ध अरु गहिरो भएको बताइन्। नेपालको संविधानमा महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानताप्रति बलियो प्रतिवद्धता रहेको बताउंदै उनले नेपालमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकारको संरक्षण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा बेलायतले गरेको सहयोगको प्रशंसा पनि गरिन् ।
उक्त कार्यक्रममा फोटो प्रदर्शनी र विविध संस्कृति झल्कने नाच प्रस्तुत गरिएको थियो भने वरिष्ठ गायिका मीरा राणाले स्वागत गीत गाएकी थिइन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले गरेका थिए।
नेपाली दूतावासले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायतको दौत्य सम्वन्ध स्थापना भएको द्विशतवार्षिकी पुरा भएको उपलक्ष्यमा १४ मार्च देखि साताव्यापी विशेष समारोह आयोजना गरेको छ ।
मंगलबार समुदघाटन विशेष समारोह र नेपाली सांस्कृतिक महोत्सव भयो भने दोश्रो दिन १५ मार्चमा नेपाली पर्यटन महोत्सव, तस्विर र कला प्रदर्शनी गरिनेछ । त्यसैगरि, तेश्रो दिन नेपाल र बेलायत सम्वन्ध सम्वन्धि वौद्धिक अन्तरक्रिया, चौंथो दिन नेपाली साहित्यिक महोत्सव तथा पुस्तक प्रदर्शनी, पांचौं दिन नेपाली संगीत र खाना महोत्सव, छैटौं दिन व्यापार र लगानी महोत्सव एवं सातौं दिन २० मार्चमा समापन विशेष समारोह र भिक्टोरिया क्रस विजेता १३ भूपू गोर्खाहरुको तस्विर अनावरण कार्यक्रम गरिने दूतावासले जनाएको छ ।
– नविन पाेखरेल, लन्डन
चैत्र ३, २०७३- युरोपेली नागरिकहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले घोषणा गरिएको भिजिट नेपाल युरोप २०१७ को औपचारिक शुरुवात लन्डनमा एक समारोहबीच गरिएको छ ।
बेलायतकालागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र ब्रिटेनको लेबर पार्टीका एकजना नेता तथा अल पार्टी पार्लियामेन्ट्रीग्रुप अन नेपाल अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्माले बुधबार अभियान उद्घाटन गरेका हुन् । सन् २०१६ मा करिब ४६ हजार बेलायती पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
अभियान सम्बन्धी वेबसाइट उद्घाटन गर्दै राजदूत सुवेदीले पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि नेपाल विश्वमै सर्वोत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा चिनिएको बताए । उनले साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनकालागि पनि नेपाल एक विशिष्ट गन्तव्यका रुपमा रहेको उल्लेख गरे । नेपाल सरकारले आफूलाई लन्डनमा मुख्यालय रहेको वल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशनकालागि स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको
बताउँदै उनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताए ।
प्रमुख अतिथि सांसद शर्माले आफू चारपटक पुगिसकेको जनाउँदै नेपाल अति सुन्दर र नेपाली जनताले न्यानो स्वागतसहित अतिथीहरुलाई भगवान सरह ठान्ने बताए । शर्माले विदेशीलाई नेपाल गइदिएर पुनर्निर्माणमा सघाउन पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रमको शुरुमा ब्रिटेनकालागि नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ जनसम्पर्क प्रतिनिधि पशुपति भण्डारी तथा आयरल्याण्डका लागि प्रतिनिधि एवं नेपाल आइरिस समाज अध्यक्ष दीपेशमान शाक्यले नेपालमा पर्यटन सम्भाव्यताबारे भिडियो तथा स्लाइड शो प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा भण्डारीले नेपाल जाने पर्यटकमध्ये ब्रिटिश पर्यटकहरु चौथो स्थानमा रहेको बताए । उनले भूकम्पपछि मानिसहरुमा केही आशंका रहेपनि अहिले नेपाल एउटा सुरक्षित गन्तव्य रहेको भन्ने सन्देश फैलाउन आफूले काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा ब्रिटेनस्थित विभिन्न ट्राभल तथा टुर अपरेटर कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।
स्वर्गीय वीरेन्द्रका सहपाठीले भने– ‘नेपाल सुन्दर छ, घुम्न जानू’
– नवीन पोखरेल, लन्डन
चैत्र ३, २०७३- नेपाल तथा बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको दुई सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपाली दूतावासले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका सहपाठी प्रिन्स रिचार्ड (डयुक अफ ग्लस्टर) लाई प्रमुख अतिथि बनाइएको उक्त कार्यक्रम बुधबारदेखि सुरु भएको हो ।
रिचार्डले इटन कलेजमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र आफ्नो सहपाठी भएको स्मरण गर्दै उनको राज्यारोहणमा आफू नेपाल गएर पदयात्रा गरेको स्मरण गरेका थिए ।
उनले नेपाल अत्यन्त सुन्दर मुलुक भएकाले त्यहाँ घुम्न जाँदा छुट्टै आनन्द आउने उल्लेख गर्दै नेपालीहरू अत्यन्त सहृदयी भएको बताए । रिचार्डले मित्रतालाई सृदृढ पार्न बेलायतले नेपाललाई सहयोग दिँदै आएको पनि बताए ।
ब्रिटिस विदेश मन्त्रालयका स्थायी उपसचिव साइमन म्याकडोनेलले भूकम्पपछि नेपालमा राहत तथा पुनर्निर्माणमा बेलायतले १४ करोड पाउन्ड सहयोग प्रदान गरेको जनाए । उनले दुवै देशबीचको सम्बन्ध आउँदो २ सय वर्षसम्म पनि फस्टाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपालीहरूको मनमा बेलायतको विशेष स्थान रहेको बताए । गोर्खा सैनिक भर्ती दुवै मुलुकबीच सम्बन्धको सबभन्दा बलियो कडी हो भन्दै उनले दुइटा विश्वयुद्धमा झन्डै ४३ हजार गोर्खालीले ज्यान गुमाएको स्मरण गरे । उनले नेपालमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा बेलायतले गरेको सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण रहेको समेत बताए ।
कांग्रेस सांसद आरजु देउवाले नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको पहिलो मुलुक बेलायत भएको स्मरण गर्दै गोर्खाली सैनिकहरूको बलिदानले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध अरू गहिरो भएको बताइन् । नेपालको संविधानमा महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानताप्रति बलियो प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै उनले नेपालमा लोकतन्त्र, मानव अधिकारको संरक्षण, मातृ तथा
शिशु स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बेलायतले गरेको सहयोगको प्रशंसा पनि गरिन् ।
सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार नेपाली पर्यटन महोत्सव, तस्बिर र कला प्रदर्शनी गरिएको थियो । त्यसैगरी, तेस्रो दिन नेपाल र बेलायत सम्बन्धसम्बन्धी बौद्धिक अन्तरक्रिया, चौथो दिन नेपाली साहित्यिक महोत्सव तथा पुस्तक प्रदर्शनी, पाँचौं दिन नेपाली संगीत र खाना महोत्सव, छैटौं दिन व्यापार र लगानी महोत्सव एवं सातौं दिन २० मार्चमा समापन विशेष समारोह र भिक्टोरिया क्रस विजेता १३ भूपू गोर्खाहरूको तस्बिर अनावरण कार्यक्रम गरिने दूतावासले जनाएको छ ।
चैत्र ४, २०७३- ब्रिटेनको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभका एकजना प्रभावशाली सांसद तथा पूर्वमन्त्री सर जेराल्ड होवार्थले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको नेपाल भ्रमणका लागि आफूले पहल गर्ने वचन दिएका छन् । नेपाल ब्रिटेन सम्बन्धको २०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि होवार्थले उक्त आश्वासन दिँदै नेपाल ब्रिटेनको एक भरपर्दो मित्र रहेको बताए ।
– कान्तिपुर संवाददाता , लन्डन
चैत्र ५, २०७३- कमिसनका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेको साझा प्रकाशन बिस्तारै तंग्रिने तरखरमा छ । बन्द भइसकेको प्रकाशनलाई सरकारले तीस करोड दिएपछि सुचारु साझा यतिखेर लन्डन आइपुगेको छ । १०४ वर्षको इतिहास बोकेको साझा प्रकाशन सरकारी व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिलो पटक लन्डन आएको हो, तीन हजार थान पुस्तक बोकेर ।
लन्डन दूतावासमा पुस्तक प्रदर्शनी
लन्डन । नेपाल र बेलायतबीच दौत्य सम्बन्ध संस्थापनाको द्विशतवार्षिकी पूरा भएको उपलक्ष्यमा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार लण्डनमा साहित्यिक महोत्सव र साझा प्रकाशनबाट उत्पादित विभिन्न पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा विभिन्न तीन हजार पुस्तक समावेश गरिएका छन् । प्रदर्शनीका अवसरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र नेपालीका सिर्जना चिनाउन यस्ता प्रदर्शनीले महत्व राख्ने भन्दै मुलुक निर्माणमा देश र विदेशमा रहेका सबै नेपालीको योगदान हुनुपर्ने बताए । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता जितेन्द्रदेवले नेपाली साहित्यलाई विश्वस्तरमा लैजान सरकारी निकायबाट भएका प्रयासको प्रशंसा गर्दै यस्ता कार्यले नेपाल र बेलायतबीचको दैत्य सम्बन्ध थप विस्तार हुने विचार व्यक्त गरे ।
साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले सो दूतावासले आफ्नो संस्थालाई स्थान दिएर साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरेकामा आभार व्यक्त गरे । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदीले साझा प्रकाशन र नेपालका साहियित्क कृतिलाई युरोपका अन्य मुलुकमा पनि लैजान आफूले पहल गर्ने बताए ।
कार्यक्रमा राजदूतको सम्पादनमा प्रकाशित ‘बेलायतमा नेपाली कवि र कविता’ पुस्तकको विमोचन पनि गरिएको थियो ।
उक्त अवसरमा बेलायतका करिब ४ दर्जन बढिले कविता वाचन गरेका थिए भने डा. माइकल हट र बासु शर्माले नेपाली साहित्य सम्वन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । मध्यरातसम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा नाटक जीगिसा समेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
– नविन पाेखरेल, लन्डन, kantipur
चैत्र ७, २०७३- बेलायत भ्रमणमा रहेका उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी शनिबार लन्डन उत्रिएदेखि नै भेटघाटमा व्यस्त छन् । आइतबार लन्डन दूतावासमा उनले बेलायती व्यवसायी तथा उद्यमी र कुटनीतिज्ञसंग अबेरसम्म छलफल गरे ।
बेलायती राजकुमारले यसरी सम्झिए नेपाल भ्रमणको अविष्मरणीय क्षण
– नवीन पोखरेल, लन्डन, kantipur
चैत्र ८, २०७३- बेलायती राजकुमार ह्यारी ठीक वर्ष दिनअघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा थिए । सोमबार अपरान्ह नेपाल भ्रमण गर्दा स्मृतिमा कैद भएका रोमाञ्चकारी र अविष्मरणीय क्षण साट्न उत्साहित देखिए ह्यारी । गत वर्ष नेपालमा पाएको अतिथि सत्कारको खुलेर प्रशंसा गरे उनले । बेलायती महारानीको शुभकामना सन्देश दिँदै मालामा सजिएका ह्यारीले अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको प्राकृतिक सौन्दर्यको दृश्य कहिल्यै नभुल्ने बताए ।
ठिक एक वर्ष अघि म नेपाल पुगेको थिएँ । मैले भेटेका सबैजनाले मलाई दिएको न्यानो स्वागत र माया, खासगरी मंगली तामाङ र उनको परिवार जसको घरमा म बसेँ, त्यो म कहिल्यै बिर्सने छैन्’, उनले अतित सम्झिए ।
बेलायत नेपालबीच कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पुरा भएको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित साताव्यापी कार्यक्रमको अन्तिम दिन ब्रिटिश राजपरिवारका सदस्य राजकुमार ह्यारी अतितमा फर्कंदै थिए ।
गत वर्ष मार्चमा नेपाल पुगेका राजकुमार ह्यारीले उत्तरी गोर्खाको तत्कालीन लापु गाउँ विकास समितिस्थित प्रभातकिरण निमाविको पुनर्निर्माणमा सघाएका थिए।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको पनि भ्रमण गरेका राजकुमार ह्यारीले उक्त निकुन्ज समुदायलाई सशक्त बनाएर कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संसारमै उदाहरणीय भएको बताए।
भूकम्पपछि ब्रिटिश तथा अन्य निकायबाट नेपालमा गरिएको राहत कार्यको प्रशंसा गर्दैह्यारीले पुनर्निर्माणको काममा समय लाग्ने बताए। उनले नेपालको पुनर्निर्माणमा ब्रिटिश जनताको साथ रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
नेपाल भ्रमणकाक्रममा आफूले गोर्खा सैनिकका केही गाउँ पुग्ने अवसर पाएको बताउँदै ह्यारीले गोर्खा सैनिकहरुको दृढ चरित्र कसरी बन्छ भन्नेकुरा आफूले बुझ्ने मौका पाएको उल्लेख गरे ।
आफ्ना पिता चार्ल्सको जस्तै ब्रिगेड अफ गोर्खाजसँग ४० वर्ष लामो सम्बन्ध नभएपनि आफूले गोर्खा सैनिकहरुसँगको सम्बन्धबाट खुशी र गर्व महशुस गर्ने गरेको उनले बताए।
राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको साहस, निस्वार्थ त्याग र व्यावसायिकताको प्रशंसा पनि गरे। ह्यारीले अफगानिस्तानमा गोर्खाहरुसँगै बसेर पिरो खसीको मासु खाएको क्षण स्मरणीय भएको बताए । उनले आफू मात्र गोर्खा सैनिकसँग प्रभावित नभइ बेलायती रानी र नागरिकहरुले समेत सम्मान गर्ने गरेको प्रसंग पनि उठान गरे । ह्यारीले गत हप्ता आफ्ना बाबुको साथ बहादुर गोर्खा जवानहरुलाई राजदरबारमा पदक दिएको समेत सम्झिए ।
ब्रिटेनमा गोर्खालीहरुप्रति उच्च सम्मान रहेको कुरा दुई वर्ष अघिको भूकम्पपछि चलाइएको सहयोग संकलन अभियानमा ब्रिटिश जनताले देखाएको सहभागिताबाट प्रष्ट भएको उनले बताएका थिए।
ह्यारीले नेपालमा किशोरी तथा महिलाहरुको सशक्तिकरण तथा बाल विवाह एवं महिला हिंसा विरुद्ध कामहरु भइरहेका सुन्दा आफूलाई खुसी लागेको बताए ।
राजकुमार ह्यारीले आउँदा कैयौं शताब्दीहरुसम्म पनि नेपाल र ब्रिटेनबीच निकट सम्बन्ध तथा मित्रता कायम रहिरहने विश्वास व्यक्त गरे । आफूले पोहोर साल लगाएको टिका मेटिन नपाउँदै फेरि नेपाल पुग्ने आफ्नो इच्छा रहेको पनि उनले जनाएका थिए।
राजकुमार ह्यारीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरि उक्त समारोह उद्घाटन गरेका थिए । उनले दूतावास हलमा भिक्टोरिया क्रस (भिसी) प्राप्त गर्ने १३ भूपू गोर्खाहरुको तस्वीर अनावरण समेत गरे ।
राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले राजकुमार ह्यारीको उपस्थितिले नेपाल र नेपाली जनताप्रति बेलायती राजदरबार, सरकार र जनताको सदभावना र सम्मानको भावना प्रतिविम्बित गर्ने बताए । उनले गोर्खा सैनिकहरुको साहस, इमान्दारिता र वीरताले बेलायतसँगको सम्वन्ध सुदृढ तुल्याएको उल्लेख गर्दै बेलायतले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पुर्‍यायाएको योगदानको प्रशंसा समेत गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा राजकुमार ह्यारीको स्वागतार्थ गोर्खा ब्रिगेड व्याण्डबाट संगीत प्रस्तुत गर्नुका साथै गोर्खा सैनिकहरुले खुकुरी नाच देखाएका थिए । साथै नेपालको हिमाल, पहाड र तराइ मधेसको संस्कृति झल्कने विभिन्न नेपाली नृत्य समेत प्रस्तुत गरिए ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गत १४ मार्च देखि साताव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत पुस्तक, फोटो तथा चित्रकला प्रदर्शनी, व्यापार तथा लगानी सम्मेलन, नेपाली कला, साहित्य र संगीत महोत्सव, बेलायत नेपाल सम्बन्धबारे बौद्धिक अन्तर्क्रिया जस्ता गतिविधि आयोजना गरेको थियो ।
नेपाल सम्झेर राजकुमार ह्यारी भावुक
बुधबार, ०९ चैत २०७३, १६ : ०५ | चिरन शर्मा | @Chiran_London, Nagarik news
लन्डन—नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको एक वर्षपछि वेलायती राजकुमार ह्यारीले नेपालको गाउँले जीवन तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण स्मरण गरेका छन्। नेपाल-वेलायत सम्बन्ध स्थापनाको दुई सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित विशेष समारोहमा बोल्दै उनले नेपालको पुनर्निर्माणमा ब्रिटिश जनताको साथ रहने बताए।
‘ठिक एक वर्ष अघि म नेपाल पुगेको थिएँ। मैले भेटेका सबैजनाले मलाईन्यानो स्वागत र माया प्रदान गर्नुभयो।खासगरी मंगली तामाङ र उनको परिवार जसको घरमा म बसें। त्यो म कहिल्यै बिर्सने छैन’, दूतावासको कार्यक्रममा उपस्थित भएका उनले भने।
गत वर्ष नेपाल आएका उनले लेउरानी गाउँकी ८६ वर्षीया मंगली तामाङलाई सम्झिएका थिए। ‘ठिक एक वर्ष अघि म नेपाल पुगेको थिएँ। मैले भेटेका सबैजनाले मलाईन्यानो स्वागत र माया प्रदान गर्नुभयो।खासगरी मंगली तामाङ र उनको परिवार जसको घरमा म बसें। त्यो म कहिल्यै बिर्सने छैन’, दूतावासको कार्यक्रममा उपस्थित भएका उनले भने।
गत मार्च महिनामा नेपाल पुगेका राजकुमार ह्यारीले उत्तरी गोर्खाको लापु गाउँस्थित प्रभातकिरण निमाविको पुनर्निर्माणमा पनि सघाएका थिए।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको भ्रमण गरेका राजकुमार ह्यारीले सो निकुन्ज समुदायलाई सशक्त बनाएर कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा संसारमै एक उदाहरण भएको बताए।
नेपाल भ्रमणको क्रममा आफूले गोर्खा सैनिकका केही गाउँ पुग्ने अवसर पाएको बताउँदै उनले गोर्खा सैनिकहरुको जस्तो दृढ चरित्र कसरी बन्छ भन्ने कुरा आफुले बुझ्ने मौका पाएको बताए।
अफगानिस्तानमा गोर्खा सैनिकहरुसँग रहँदा उनीहरुले पकाएको खसीको पीरो झोल पिउँदा जाडो दिनमा पनि पसिना छुटेको उनले बताउँदा सहभागी हाँसेका थिए।
आफ्ना पिताले जस्तै ब्रिगेड अफ गुर्खाजसँग चालिस वर्ष लामो सम्बन्ध नभए पनि आफूले गोर्खा सैनिकसँगको सम्बन्धबाट गर्व महसुस गर्ने गरेको उनले बताए। राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको साहस, निस्वार्थ त्याग र पेशाप्रति निष्ठाको प्रशंसा पनि गरे।
राजकुमार ह्यारीले दूतावासभित्र ब्रिटिश सेनाको सर्वोच्च सम्मान भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मानित १३ जना गोर्खा सैनिक तथा अधिकृतहरुको तस्वीरको अनावरण पनि गरेका थिए।
सो कार्यक्रममा वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीले स्वागत गरेका थिए भने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नयाँ संविधान पछि नेपाल स्थायित्वतर्फ अगाडि बढेको र सरकारले छिट्टै तीन तहको चुनाव गराउने तयारी गरिरहेको बताएका थिए।
कार्यकममा ब्रिटिश रक्षा मन्त्री मार्क लाङ्कास्टर, विभिन्न मुलुकका राजदूतहरु तथा बेलायतस्थित नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।